သနပ်ခါးမေ: July 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:28 PM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများက ဝက်ခြံပေါက်လာရင် မျက်နှာပေါ်လိမ်းဖို့ပဲ အာရုံထားတတ်ကြတာမဟုတ်လား? ဝက်ခြံထွက်ခြင်း မထွက်ခြင်းက အစားအသောက်ပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ လူက အစာစားသလို၊ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်လေးတွေကလည်း လူစားတဲ့ အစာ ထဲမှာပါတဲ့ အာဟာရကို မှီဝဲကြရပါတယ်။ လိမ်းတာထက်စာရင် သွေးကနေစုပ်ယူတဲ့ အာဟာရက ပိုတောင် သက်ရောက်မှု များပါတယ်။
လိမ်းဆေး လိမ်းတုန်းပဲ ခဏသက်သာ ရပ်လိုက်တာနဲ့ ဝက်ခြံ ပြန်ပြန်ထွက်နေတယ်ဆိုရင် အစားအသောက်လေးနဲ့ ထိန်းပေးကြည့်ပါနော်။ ရေရှည်အတွက်ပေါ့။
နို့နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်း
DHT ဟော်မုန်းဟာ မျက်နှာ အဆီ ထွက်စေတဲ့ တရားခံပါပဲ။ အဆီတွေ အပေါက်သေးသေးလေးထဲကနေ ပြုံထွက်တဲ့ အခါ ပိတ်တဲ့ နေရာက ပိတ်၊ ခဲတဲ့ ဟာက ခဲ ဖြစ်သွားတော့ ဝက်ခြံလေးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ နို့နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေ က အဲဒီ ဟော်မုန်းကို ပိုထွက်စေပါတယ်။ သူတို့ကို ရှောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဝက်ခြံ ပိုထွက်တတ်တဲ့ ရာသီသွေးပေါ်ခါနီး အချိန်တွေမှာပေါ့။
တိရစ္ဆာန် တွေက နေရတဲ့ အဆီတွေရယ်၊ စားအုံးဆီရယ်။ ရေခဲသေတ္တာ ထဲ ထည့်လိုက်ရင် ခဲသွားတတ်တဲ့ အဆီတွေလေ။ သူတို့က ကျန်းမာရေးအတွက်တင် မဟုတ်ဘူး၊ မျက်နှာ အတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ နဂိုထဲကမှ အဆီများများထွက်လို့ ခဲချင်ချင်က သူတို့နဲ့လည်းပေါင်းရော တန်းကို ပိတ်သွားရော။ ဆီကြော်လေးတွေ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ကြည့်ပါနော်။
သူက ဝက်ခြံထွက်စေတဲ့ တရားခံတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆားတို့ရဲ့ သဘာဝက ရေကို ဆွဲတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ အငံစားတာများတဲ့ အခါ ရေကိုဆွဲသလို ဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံက ပို ရောင်ကိုင်းလာတာပါ။
တချို့ studies တွေမှာ အသင့်စား အစားအစာတွေနဲ့ ပေါင်မုန့်ကို စားတဲ့ သူတွေက မစားတဲ့ လူတွေထက် ဝက်ခြံ ပိုပေါက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
အသီးအရွက်ထဲမှာမှ အဝါရောင် အနီရောင်ရှိတဲ့ Vitamin A ကြွယ်ဝတဲ့ အသီးအနှံတွေဟာ ဝက်ခြံထွက်တာကို ကာကွယ်တဲ့ နေရာရော၊ ကုသတဲ့ နေရာရောမှာ အစွမ်းထက်ပါတယ်။ အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်များ ကိုယ်တိုင် ဝက်ခြံကုသတဲ့ အခါ A ကို လိမ်းဆေး အနေနဲ့ တမျိုး စားဆေး အနေနဲ့ တဖုံပေးကြပါတယ်။ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ခရမ်းချင်သီးဖြစ်ဖြစ်၊ မုန်လာဥဖြစ်ဖြစ် နေ့တိုင်းပါအောင်စားကြည့်ပါနော်။ ဝက်ခြံထွက်တာ သိသိသာသာ လျှော့သွားပါလိမ့်မယ်။
သူကတော့ Vitamin C ကြွယ်ဝ စွာပါဝင်တာကြောင့် ဝက်ခြံဖြစ်ပြီးတဲ့ အခါ နဂိုအသားအရေကို အမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ C ဟာ healing process မှာပါဝင်တဲ့ ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။ သူ့ကို တွဲစားထားရင် ဝက်ခြံပျောက်သွားတဲ့ အခါ အမာရွတ် တော်တော်နဲ့ ပျောက်ပါ့မလားဆိုပြီး စိတ်မပူရတော့ပါဘူး။ သံပူရာသီးတင် မဟုတ်ပါဘူး။ လိမ္မော်သီး၊ ရှောက်သီး အစရှိတဲ့ အရည်ရွှမ်းသီးတွေမှာလည်း အလားတူအာနိသင်ရှိပါတယ်။
Green Tea ကို ခွက်တစ်ဝက်စာ သောက်တာက လတ်ဆတ်တဲ့ အသီး 1 ကီလို စားတာနဲ့ antioxidant အာနိသင်ခြင်းအတူတူပါပဲတဲ့။ နောက်တစ်ခု က အစောက ပြောခဲ့တဲ့ ဟော်မုန်း ထွက်တာကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ ရောင်တာကိုလည်း ကျစေပါသတဲ့။
Others - Ayuveda ( အာယူဗေဒ ) ကျမ်းထဲမှာတော့ နနွင်းတို့ ရှားဆောင်းလက်ပတ် တို့ကို အပိုဆောင်း တွေ့ရမှာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် နိုင်အောင် ပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ နောက်တော့ ဆေးလည်း လိမ်း၊ အစားအသောက် ပုံစံလည်းပြောင်းရင်းနဲ့ မထွက်တော့တာ တော်တော်ကြာပြီ။ အရင်ကဆို အသီးအရွက် လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ လှချင်တော့လည်း ကြိတ်မှိတ်စားရင်းနဲ့ နောက်တော့လည်း ကြိုက်သွားတာပါပဲ။ အသားအရေလည်းလှလာတယ်။ နွားနို့ ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်လို့ မရှောင်နိုင်ဘူး။ လာခါနီးရက်နားဆိုရင်တော့ ရှောင်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုပဲ အလုပ်ဖြစ်နေတာ။းD
ရှောင်လို့ ဆောင်လို့ အဆင်ပြေတယ်ဆို မြတ်ကြည်ကို လက်တို့လိုက်နော်။
By **~ မြတ်ကြည်~** 5:20 AM DIY, လက်​သည်း ( nail art )
အိမ်မှာ အိုင်းရှဲဒိုးတွေ ဝယ်ပြီး ဒိတ်တွေ အောက်၊ မျက်လုံးပေါ်လည်း မတင်ချင်၊ လွှတ်လည်း မပစ်ရက်တဲ့ အခါ ဒီလို လက်သည်းနီလေး တွေ လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူများမှာ မရှိတဲ့ အရောင်ဆန်းဆန်းလေးတွေတောင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်?
လိုအပ်တာလေး တွေက --
1. လက်သည်းနီ အကြည် တစ်ပုလင်း (450 ကျပ် :P)
2. မသုံးတော့တဲ့ အိုင်းရှဲဒိုး
အိုင်းရှဲဒိုးမျက်နှာပြင်ကို သွားကြားထိုးလေးနဲ့ အမှုန့်လေးတွေ ထွက်လာအောင် ခြစ်။ ပုလင်းထဲကို သဲ့ယူ၊ နည်းနည်း ထည့်လိုက် သွားကြားထိုးတံလေးနဲ့ မွှေလိုက် လိုချင်တဲ့ အရောင်အနေအထားအထိပေါ့နော်။ အရောင်နုနုလိုချင်ရင် အမှုန့်နည်းနည်းပဲ လိုပါတယ်။
အိမ်မှာ glitter အလက်လက် လေးတွေ ရှိရင်လည်း ထည့်ကွန့်လို့ရပါတယ်နော်။ ဟိုနေ့က ရွှေရောင်အလက်လက်လေးတွေ ဝယ်ထားတာ ဘယ်သွားထားမှန်းမသိလို့၊ တကယ်လုပ်တော့ ရှာမတွေ့တော့ဘူး။ :D
လုပ်မယ်ဆို စာရွက်တစ်ရွက် အောက်မှာခံဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ အမှုန့်လေးတွေ သွန်ရပြုရဆိုတော့ စက္ကူ ခံထားရင် အလေအလွင့် နည်းတာပေါ့။
ဒီ tutorial လေးကို youtube: cutepolish ဆီမှ မှီငြမ်းပါတယ်ရှင်။
67th Matyr's Day, 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:13 PM Website လမ်းညွှန်
မြင်တဲ့ တွေ့တဲ့ အတိုင်း မြတ်ကြည် phone လေး မထူးခြားနေဘူးလား။ Application Icon လေးတွေ မတူတော့ဘူး လေနော်။ အဲဒါလေးတွေ ပြောင်းပေးတဲ့ application လေး ပေးချင်လို့။ မြင်နေကျမဟုတ်ပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Icon ၊ wall paper လေးတွေ အပြင် deco pack လေးတွေလည်းရှိတယ်။ :)
Down ချင်တယ်ဆိုရင် လိပ်စာက-
ညွှန်းပေးတဲ့ ညီမလေး မေသင်း http://littleminniemt.blogspot.com ကို အထူးကျေးဇူးပါလို့။ :)
ညီမလေး မေသင်းရဲ့ ဖုန်း home screen ( မ လာတာ) :P
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့လေး တစ်ရက် ဖြစ်ပါစေရှင်။ :)
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:30 PM ဖက်ရှင်
၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ အတွက် မြန်မာ ဝတ်စုံမှာ trend ဖြစ်နေတာလေးတွေက ဇာပန်းကပ် ဖက်ရှင်လေးတွေပေါ့နော်။ အရင် ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ တုန်းက ချီဖွန် လေးတွေကို ခြင်ထောင်ဇာ အပါးလေးတွေနဲ့တွဲချုပ်တာလေး ရေပန်းစားခဲ့တာ။ ပျိုမေတို့ အတွက် ပွဲတက် ချုပ်ဖို့ မြတ်ကြည် သဘောကျတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးတွေ စုပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပုံလေးတွေကို Silk & Style Fabric house ၊ ရွှေနန်းထက်တော်ဝင်နဲ့ Fashion Euphoria က ကူးယူဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အောက်ခံ ဖက်ဖူးစိမ်း ရောင်လေးပေါ်မှာ ခါးအထိ အဝါဇာပန်းလေးတွေ။ အပေါ်ကမှ အစိမ်းလေးကို တစောင်းလေး ထပ်ပြီး ချုပ်ထားပါတယ်။
ဒေါင်လိုက် ဇာပန်းကျဲလေးတွေ ကြားမယ် ကျောက်လေးတွေကို အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
အရှေ့တိုင်း ဆန်တဲ့ လည်ထောင်၊ လက်တို ဝတ်စုံလေးရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဇာပန်းလေးတွေကို အတည့်မဟုတ်ဘဲ သူ့အနားတွန့်တိုင်း ချုပ် ထားတာလည်း အမြင်ဆန်းလို့နေပါတယ်။
ဒါလေးက တော့ ဇာကပ် မဟုတ်ပါဘူး။ အဖြူလေးနဲ့ မရမ်းရောင်ဇာလေးကို သပ်သပ်လေး တွဲထားတဲ့ ပုံစံလေး သဘောကျလို့ပါ။ ဖဲပြားလေး အပါအဝင်ပေါ့။
ပဝါကို တစောင်းလေး ချုံထား သလို တစ်ဖက်ကို အရှည်၊ တစ်ဖက်ကို လက်ပြတ်ပုံစံလေး ဇာလေးတွေ ကပ်ထားပါတယ်။
ကြယ်ပုံ လည်ပင်းကို ခါးတောင် ပုံစံမျိုးလေး ချုပ်ထားတာကို ပြချင်တာပါ။ အဲဒါကို ခြင်ထောင်ဇာ အပါးလေးနဲ့ လက်ရှည်ပုံစံ တွဲပေးထားပါတယ်။ ဒီတိုင်းလည်း ကြည့်ကောင်းတာပဲကိုနော်။
ထသွားထလာ ချည်သားနဲ့ ပိုး တွဲဆက်တဲ့နေရာလေးကို ဇာတန်းလေး ကပ်ပေးထားပါတယ်။
ရင်လျှား လက်ရှည် ပုံစံလေးမှာ bodice ကို ဗြောင်ထားပြီး ဇာပန်းနွယ်လေးတွေ မညီမညာ ကျနေတဲ့ ပုံစံလေး ကပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာက ဇာပန်းလေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဒာ အချိုးအဆစ်နဲ့ အလိုက်သင့်လေးကပ်ပြီး မိန်းမသား တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်လုံး အလှ ပေါ်လွင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဇာကပ် ဖက်ရှင်လေး ချုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်ပုံစံ အပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပြီလို့ ယူဆပါတယ်နော်။ Euphoria မှာတော့ ချုပ်ပြီး သား အင်္ကျီလေးတွေရောင်းပါတယ်။ လှလည်း လှတယ်။ မြတ်ကြည်ဖော်ပြသွားတဲ့ ဆိုင်လေးတွေရဲ့ page တွေမှာ တခြား ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
မြတ်ကြည် သဘောကျတာလေးတွေပဲ ရွေးပြီးတင်ထားတာမို့ တယောက်နဲ့ တယောက် အကြိုက်မတူတဲ့ အတွက် page လေးတွေကို သွားကြည့်ဖို့ facebook လိပ်စာလေးတွေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။